I-Sea Breeze ihlomele ukubaleka umahamba-nendlwana wamaholide - uhambo olufushane nje oluya emabhishi anesihlabathi.
I-Sea Breeze inepulani elivulekile langaphakathi elinekhishi, izihlalo ezivulekile, amagumbi okulala ama-2 (imibhede eyi-1 double + 2 eyodwa) kanye negumbi lokugeza.
Inomlilo wegesi endaweni ephambili yokuhlala, ukufudumeza komoya ofudumele kuwo womabili amakamelo okulala, irediyetha ebekwe odongeni egunjini lokugeza kanye nama-heater kagesi angu-2.
4.77 ·64 okushiwo abanye
I-Sea Breeze caravan isendaweni enotshani ebiqhutshwa umndeni owodwa iminyaka eminingi. Awekho ama-clubhouse anomsindo noma izindawo zokudlala zezingane. Izinyoni ezifudukayo zindiza phezulu ziye endaweni yokulondoloza i-RSPB e-Snettisham.